မိန်းကလေးတွေအတွက် Hourglass Shape ပုံဖော်ပေးမယ့် Corset
4 May 2018 . 5:40 PM
အလှအပရေးရာမှ တစ်ဖက်ကမ်းလွန်လှချင်ကြတာ မိန်းကလေးတွေပါ။ အသားအရေလေးကြည်ချင်တယ်။ အရပ်လေးရှည်ချင်တယ်။ အသားဖြူချင်တယ်။ မေးရိုးလေးသွယ်ချင်တယ်။ ပါးလေးမို့မို့လေးဖြစ်ချင်တယ်။ နည်းလမ်းမျိုးစုံ ကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အလှကို ပြီးပြည့်စုံချင်ကြတယ်။ ဒီလို ကဏ္ဍအစုံထဲမှာမှ ဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးလေးသွယ်ချင်တာက အလိုချင်ဆုံး ကဏ္ဍဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီအတွက် အစာတွေလျော့စားကြတယ်။ ပိန်ဆေးတွေသောက်ကြတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမလိုက်ပဲ အလွယ်လမ်းလိုက်ကြတယ်။
ဒီလိုလုပ်မိတဲ့အခါ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မလှပနိုင်ကြတော့ဘဲ မလိုချင်တဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ခါးလေးကိုလည်း သေးသေးသွယ်သွယ်ဖြစ်စေမယ်၊ ဗိုက်လေးကိုလည်း ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပြောပြပေးချင်တယ်။ အဲဒါကတော့ Corset ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Corset ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ခါးလေးကို Hourglass Shape ပုံစံလေးဖြစ်အောင် သေးသေးလေးနဲ့ သွယ်သွယ်လေးဖြစ်စေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ခါးရှည်ဘော်လီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခါးသေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့အပြင် ဗိုက်ချပ်အောင်ပါ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Corset ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ ဘရာစီယာလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ တင်ဖုံးတဲ့ ခါးရှည်ဘော်လီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ လာပါစေ… Corset ကိုဝတ်ဆင်ရတာကတော့ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ကြိုးကို တင်းကျပ်နေအောင် ဆွဲချည်ပြီး ဝတ်ဆင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Corset က သာမန် Bra တွေထက်ပိုပြီး တောင့်တင်းပါတယ်။ အတွင်းထဲမှာ Flexible Steel Rod တွေနဲ့ထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်တာ၊ ထတာကအစ အမြဲတမ်း မတ်မတ်လေးဖြစ်နေစေပါတယ်။
Corset ကို ဘယ်လိုဝတ်ဆင်သင့်လဲ?
Corset ဟာ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အရောင်မျိုးစုံနဲ့လာတဲ့အတွက် Fashion ကျကျ Style ထွင်ပြီး ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ Satin လိုမျိုး ပိုးသားအစတွေနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ Corset မျိုးဆိုရင်တော့ အင်္ကျီအပြင်ဘက်မှာထုတ်ပြီး ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပုံစံကလည်း Underbust နဲ့ Overbust ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Underbust ကတော့ ဘော်လီခွက်မပါပဲ ခါးနဲ့ဗိုက်ကိုသာ အဓိကထားပြီး ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Overbust ကတော့ ဘော်လီခွက်ပါ တစ်ပါတည်းပါတဲ့အတွက် အလုပ်မရှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Corset Size ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
Underbust vs Overbusts
Corset ရဲ့ Size က သာမန် Bra တွေထက် Size အမှန်အကန်ရဖို့ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Measurement တွေကို နားလည်သွားရင်တော့ အဲလောက်ခက်ခဲမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ခါး Size အပေါ်မူတည်ပြီး Corset ကို ဝတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ့်ရဲ့ ခါး Size က ပတ်လက်အတိုင်း ၃၈လက်မ အောက်မှာရှိနေရင်တော့ တိုင်းလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာထက် ၄လက်မ (သို့) ၇လက်မလျော့တဲ့ Size ကိုမှာပါ။ ပတ်လည်အတိုင်းအထွာက ၃၈လက်မထက်များနေရင်တော့ Corset Size ကို တိုင်းလို့ရတဲ့ ခါး Size ထက် ၇လက်မ (သို့) ၁၀လက်မလျော့တဲ့ Size ကိုမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခါးလေးကို သေးသွယ်ချင်တယ်၊ ဗိုက်လေးကို ချပ်ချင်တဲ့သူတွေ အမြဲတမ်းလိုလိုဝတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ချွတ်လိုက် ဝတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ခဏတာပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ် နှစ်ပတ်အတွင်း Hourglass Shape ကို သိသိသာသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reference Link: https://www.orchardcorset.com
မိနျးကလေးတှအေတှကျ Hourglass Shape ပုံဖျောပေးမယျ့ Corset
အလှအပရေးရာမှ တဈဖကျကမျးလှနျလှခငျြကွတာ မိနျးကလေးတှပေါ။ အသားအရလေေးကွညျခငျြတယျ။ အရပျလေးရှညျခငျြတယျ။ အသားဖွူခငျြတယျ။ မေးရိုးလေးသှယျခငျြတယျ။ ပါးလေးမို့မို့လေးဖွဈခငျြတယျ။ နညျးလမျးမြိုးစုံ ကဏ်ဍမြိုးစုံနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အလှကို ပွီးပွညျ့စုံခငျြကွတယျ။ ဒီလို ကဏ်ဍအစုံထဲမှာမှ ဗိုကျခပျြပွီး ခါးလေးသှယျခငျြတာက အလိုခငျြဆုံး ကဏ်ဍဖွဈလို့နပေါတယျ။ ဒီအတှကျ အစာတှလြေော့စားကွတယျ။ ပိနျဆေးတှသေောကျကွတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့လမျးစဉျအတိုငျးမလိုကျပဲ အလှယျလမျးလိုကျကွတယျ။
ဒီလိုလုပျမိတဲ့အခါ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ မလှပနိုငျကွတော့ဘဲ မလိုခငျြတဲ့ ကိစ်စတှဖွေဈလာခဲ့တယျ။ ဒီလိုမြိုးတှမေဖွဈအောငျ ကိုယျ့ရဲ့ ခါးလေးကိုလညျး သေးသေးသှယျသှယျဖွဈစမေယျ၊ ဗိုကျလေးကိုလညျး ခပျြခပျြရပျရပျလေးဖွဈစမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကိုပွောပွပေးခငျြတယျ။ အဲဒါကတော့ Corset ဘဲဖွဈပါတယျ။
Corset ဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ ခါးလေးကို Hourglass Shape ပုံစံလေးဖွဈအောငျ သေးသေးလေးနဲ့ သှယျသှယျလေးဖွဈစအေောငျ ပွုလုပျပေးနိုငျတဲ့ ခါးရှညျဘျောလီပဲဖွဈပါတယျ။ ခါးသေးအောငျလုပျပေးတဲ့အပွငျ ဗိုကျခပျြအောငျပါ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ Corset ဆိုတာ မိနျးကလေးတှဝေတျတဲ့ ဘရာစီယာလိုမြိုးမဟုတျခဲ့ပါဘူး။ တငျဖုံးတဲ့ ခါးရှညျဘျောလီပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီဇိုငျးအမြိုးမြိုး၊ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ လာပါတယျ။ ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ပဲ လာပါစေ… Corset ကိုဝတျဆငျရတာကတော့ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ ကွိုးကို တငျးကပျြနအေောငျ ဆှဲခညျြပွီး ဝတျဆငျရတာပဲဖွဈပါတယျ။ Corset က သာမနျ Bra တှထေကျပိုပွီး တောငျ့တငျးပါတယျ။ အတှငျးထဲမှာ Flexible Steel Rod တှနေဲ့ထောကျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ ထိုငျတာ၊ ထတာကအစ အမွဲတမျး မတျမတျလေးဖွဈနစေပေါတယျ။
Corset ကို ဘယျလိုဝတျဆငျသငျ့လဲ?
Corset ဟာ ဒီဇိုငျးပုံစံ၊ အရောငျမြိုးစုံနဲ့လာတဲ့အတှကျ Fashion ကကြ Style ထှငျပွီး ဝတျဆငျလို့ရပါတယျ။ Satin လိုမြိုး ပိုးသားအစတှနေဲ့ ခြုပျထားတဲ့ Corset မြိုးဆိုရငျတော့ အင်ျကြီအပွငျဘကျမှာထုတျပွီး ဝတျဆငျလို့ရပါတယျ။ ထုတျလုပျတဲ့ ပုံစံကလညျး Underbust နဲ့ Overbust ဆိုပွီး ၂မြိုးရှိပါတယျ။ Underbust ကတော့ ဘျောလီခှကျမပါပဲ ခါးနဲ့ဗိုကျကိုသာ အဓိကထားပွီး ခြုပျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ Overbust ကတော့ ဘျောလီခှကျပါ တဈပါတညျးပါတဲ့အတှကျ အလုပျမရှုပျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။
Corset Size ကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
Corset ရဲ့ Size က သာမနျ Bra တှထေကျ Size အမှနျအကနျရဖို့ ပိုခကျခဲပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Measurement တှကေို နားလညျသှားရငျတော့ အဲလောကျခကျခဲမယျမထငျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ ခါး Size အပျေါမူတညျပွီး Corset ကို ဝတျယူနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ – ကိုယျ့ရဲ့ ခါး Size က ပတျလကျအတိုငျး ၃၈လကျမ အောကျမှာရှိနရေငျတော့ တိုငျးလို့ရတဲ့အတိုငျးအတာထကျ ၄လကျမ (သို့) ၇လကျမလြော့တဲ့ Size ကိုမှာပါ။ ပတျလညျအတိုငျးအထှာက ၃၈လကျမထကျမြားနရေငျတော့ Corset Size ကို တိုငျးလို့ရတဲ့ ခါး Size ထကျ ၇လကျမ (သို့) ၁၀လကျမလြော့တဲ့ Size ကိုမှာရမှာဖွဈပါတယျ။
ခါးလေးကို သေးသှယျခငျြတယျ၊ ဗိုကျလေးကို ခပျြခငျြတဲ့သူတှေ အမွဲတမျးလိုလိုဝတျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ ခြှတျလိုကျ ဝတျလိုကျနဲ့ လုပျနမေယျဆိုရငျတော့ အကြိုးသကျရောကျမှုက ခဏတာပဲရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ တဈပတျ နှဈပတျအတှငျး Hourglass Shape ကို သိသိသာသာရရှိမှာဖွဈပါတယျ။